जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा.लि. द्वारा जनबोली डटकम डिजिटल पत्रिकाको शुभारम्भ जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा.लि. द्वारा जनबोली डटकम डिजिटल पत्रिकाको शुभारम्भ
नेपाली सञ्चार जगतमा जनबोली न्युज नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड बुधबारबाट औपचारीक रुपमा शुभारम्भ भएको छ । अनलाईन समाचार सेवाको खुल्ला आकाशमा यस सञ्चार प्रतिष्ठान अन्र्तगतको जनबोली डटकम डिजिटल पत्रिका एक चम्किलो सूर्यको रुपमा उदायको छ । जनवीविका, राष्ट्र विकास, लोकतान्त्रिक एवं विधिको शासन, सुशासनका साथै भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन कायम गर्नका लागि यो सञ्चार प्रतिष्ठानले सदैव कलम चलाउने छ । समाजका बिकृति बिसंगति बिरुद्ध खवरदारि गर्दै, हरेक क्षेत्रका सकारात्मक पक्षलाई उजागर गर्ने यस प्रतिष्ठानको मुल लक्ष्य हो । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयबस्तुमा कलम चलाउने प्रतिष्ठान समुहको प्रतिवद्धता छ । हामि चाडै जनबोली अनलाईन रेडियो, अनलाईन टेलिभिजन र पत्रिका मार्फत पनि नेपाली पत्रकारिता जगतमा देखापर्नेछौ । यस प्रतिष्ठान अन्र्तगतका सबै प्रस्तुतीमा जनताका सवाललाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने छौं । जनबोली भन्ने वित्तिकै जनताको बोली भन्ने बुझिन्छ । तसर्थ आम जनताले बोल्न खोजिरहेका सवालहरु नै यस सञ्चार प्रतिष्ठानले ओकल्ने भएकाले यो प्रतिष्ठान जनताको प्रतिनिधि आवाजकर्ता हुनेछ । झण्डै ८० प्रतिशत जनतालाई आवाज विहिनको रुपमा हेरिने सिमित प्रतिशतको बोलबोलावटले नै सञ्चार माध्यमका प्रकाशित, प्रशारित सामाग्री भइरहेको नेपाली सञ्चार जगतको परिपाटीलाई यसले चिर्नेछ । हरेक नागरिकका आवाज नै यस प्रतिष्ठान अन्र्तगतका सञ्चार सामाग्री, समाचार, रेडियो, टेलिभिजन कार्यक्रम बन्नेछन् । यो हाम्रो प्रतिवद्धता हो । साथै समाज र राष्ट्रको समग्र विकासका लागि हामि सदैव खवरदारी गर्नेछौं ।
नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा दुई दशक भन्दा बढी अनवरत रुपमा कलम चलाउनुहुने, राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकार समुह साथै उत्कृष्ट व्यवस्थापकको परिचय बनाइसकेका व्यवस्थापक समुहको संस्थागत आवद्धताले यो प्रतिष्ठान झनै दरिलो बनेको छ । निरन्तर रुपमा जनताका पक्षलाई उठान गर्दै सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्ने, निष्पक्ष पत्रकारीताका पुजारी पत्रकार समुहले व्यवसायीक पत्रकारीता प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । कसैको पक्षपोषण नगरी स्वतन्त्र पत्रकारिताको सिद्धान्त यस प्रतिष्ठानमा अबलम्बन गरिनेछ ।
हाम्रो कमल कहाँ चलिरहेको हुनेछ र कहाँ चल्नेपर्ने हो यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा पनि तपाई जनतामा नै छोडेका छांै । हाम्रा पाठकको अमुल्य सुझाव सल्लाह नै हाम्रो अमुल्य धन हो । हाम्रो मार्गदर्शन हो । तसर्थ हरेक क्षणमा सल्लाह सुझावको अपेक्षा गरिरहनेछांै । हाम्रो यस अभियानमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका हरेक पाठक वर्गहरुको निरन्तर माया तथा प्रेरणाको प्राप्त भइरहने अपेक्षा गर्दछौं ।